ASM Raage – War sugan oo aad ku kalsoonaan karto
ku soo dhoqoow asmraagenews.com. In shaa allah waxaan kaa haqab tiri doonaa baahidaada la xariirta war lagu kalsoonaan karo.
Afhayeenka ra’isul wasaare rooble oo farmaajo ku sheegay madaxwaynihii hore
Warka ka soo baxay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee khuseeya shaqada Ra’iisul Wasaaraha iyo isku daygiisa in uu ciidan kula wareego xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, waa tallaabooyin baal marsan dastuurka iyo sharciyada dalka, mas’uuliyadda wixii ka dhashana waxaa qaadaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu sidii caadiga ahayd u wataa shaqo maalmeedkiisii, waxaana ka go’anContinue reading “Afhayeenka ra’isul wasaare rooble oo farmaajo ku sheegay madaxwaynihii hore”
Muqdisho, Diseembar 27, 2021: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo; Markuu arkay qodobka 87aad ee Dastuurka KGM ah ee dalka kaas oo tilmaamaya inuu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadii’da asaasiga ah ee Dastuurka; Markuu tixraacay wareegtadii uu soo saaray 18kii Jannaayo 2018 ee la xiriirtay ilaalinta dhulalka danta guud si waafaqsan qodobka 43aadContinue reading “farmaajo oo shaqo joojin ku sameeyey Ra’isul wasaare roobe. khilaafkii oo cirka isku shareeray”
Qodobka 1 aad Ha ka boodin quraacda, waa in aad maalin walba quraacataa hadaad heli karto adigoo cunaya ugu yaraan10 garaam oo borotiin ah. Cunista quraac dheellitiran maalin walba – oo uu ku jiro borotiin qiyaasan – waxay ku siin doontaa tamarta aad u baahan tahay.”Haddii aad ka boodo quraacda, waxaad maalinta ku bilaabaysaa sidaContinue reading “5 Siyaabood oo aad si fudud cayilka isaga yarayn karto”